Tdị nyocha - Mestech Industrial Limited
Prototype Ndinam bụ ime otu ma ọ bụ ọtụtụ ihe atụ dị ka ngwaahịa si imewe ịbịaru ma ọ bụ tụụrụ ime, site na ụfọdụ pụrụ iche nhazi ụzọ, dị ka chọrọ nke ngwaahịa anya na Ọdịdị ịbịaru enweghị mmepụta ebu.
Ihe eji eme ihe dika ihe ndi ozo dika ihe eji eme ya na udiri, agba na udi. A na-eji ya iji nyochaa ma nha nha atụmatụ, ọdịdị, njirimara agba na ụfọdụ ọrụ arụmọrụ nke ngwaahịa ndị e mepụtara ọhụrụ ziri ezi ma nwee ezi uche, ma ọ bụ iji gosi ngwaahịa nye ndị ahịa iji nweta echiche ndị ahịa ma ọ bụ mmata ahịa.
Usoro ndụ ndụ na-amalite site na imewe wee kwụsị n'ahịa. Nhazi ngwaahịa na-akọwa ọrụ, ọdịdị na ntụkwasị obi nke ngwaahịa. Kpebisie ike na usoro na ego nke ngwaahịa a. Nhazi ngwaahịa bụ ọrụ siri ike, nke metụtara ihe ịga nke ngwaahịa niile. Site na imepụta ngwaahịa ruo n'ọkwa ikpeazụ, ụdị ngwaahịa ọ bụla emere maka imepụta ihe ga-etinye ego, oge na ike dị ukwuu. Ezigbo atụmatụ bụ isi ihe ga-eme ka ihe ịga nke ọma n’ahịa. Mmepụta nke ụdị ngwaahịa iji nyochaa, nyochaa ma melite imepụta ngwaahịa bụ ụzọ dị mkpa iji nweta atụmatụ ngwaahịa zuru oke. Aka osisi n'ichepụta nwere ike n'ụzọ dị irè melite ọsọ nke ngwaahịa mmepe
A na-eji plastik, ngwaike ma ọ bụ igwe elektrọnik emepụta ngwa ọrụ izugbe, dịka elektrọnik, ngwa eletriki, ụgbọala na ngwa ọgwụ. Iji zere oké njọ n'efu na uka mmepụta ebu na mmepụta mere site imewe njehie, anyị na-eme nlereanya samples na a obere na-eri site machining, laser akpụ na nwa oge ebu na ụzọ ndị ọzọ maka analysis, nzukọ na nwale, ma ọ bụ na-egosi ha na ndị ahịa.
1. Ntughari aka nke igwe ihe nlere: uzo ato di isi ime igwe
(1). Mpempe akwụkwọ: ekwe, igbutu, ịgbasa ma jiri aka ma ọ bụ ngwaọrụ dị mfe. A na-ejikarị usoro a eme ihe maka ịme ihe nlereanya nke akụkụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ siri ike. Ngwa ndị ọdabara gụnyere nchara, alloy alloy, ọla kọpa na zinc alloy.
(2) CNC machining: igwe, ntụgharị, egweri, ihapu na mkpọpu ala nke ihe igwe na ngwaọrụ igwe. A na-eji usoro a maka imepụta ụdị ihe mgbochi na akụkụ akụkụ, mgbe ụfọdụ, a ga-arụkwa oghere ma ọ bụ mmecha mpaghara nke ụdị mpempe akwụkwọ. Ngwa ndị ọdabara gụnyere nchara, alloy alloy, ọla kọpa na zinc alloy.
(3). Metal laser 3D obibi (sintering): Metal 3D ebi akwụkwọ na-eji na-emepụta akụkụ na mgbagwoju shapes na owuwu na-esiri ike na-emepụta site machining na mpempe akwụkwọ metal nhazi, dị ka engine pupụtara, ebu jụrụ mmiri ọkpọkọ, wdg Ngwa ndị dị mkpa gụnyere ngwá ọrụ ígwè na ígwè martensitic, igwe anaghị agba nchara ọcha titanium na titanium alloy, alloy alloy, nickel base alloy, cobalt chromium alloy na copper base alloy
2. Plastic ụdị e nwere ụzọ atọ dị mkpa iji mee ihe ngosi plastik:
(1) .CNC machining: ya bụ, plastic oghere na-machined na igwe ngwá ọrụ. A na-eji usoro a maka ịkpụzi shei, ngọngọ na imegharị ahụ. Ọ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile siri ike.
(2). Laser 3D ebi akwụkwọ na sintering (SLA na SLS): SLA na-eji na-eme ka prototype nke mgbagwoju akụkụ na ike CNC anya na Ọdịdị, tumadi iji ABS na ịkwanyere ihe a na-akpọ photosensitive resin. SLS laser na-akpụ akpụ dịkwa mma maka plastik TPU dị nro nke enweghị ike ịhazi ya na CNC, na plastik injinịa dịka naịlọn.
(3) .Obere ogbe ngwa ngwa na-emegharị site na silica gel ebu (tinyere agụụ na-ejuputa na mkpuchi): usoro a na-ewe ihe nlereanya nke CNC mepụtara ma ọ bụ nke laser bipụtara site na 3D dị ka isi, wụsara ọnụ ọgụgụ nke silica gel ebu, wee tinye ya plastic Liquid n'ime oghere silica gel. Mgbe ị gwọchara gị, belata akwa silica gel iji nweta akụkụ plastik. Ihe eji eme akụkụ ahụ bụ ABS, PU, ​​PC, naịlọn, POM na PVC dị nro
3. Prototype Ndinam silica akụkụ:
Silica gel ihe dị nro na agbaze agbaze ọkụ ya dị ala ma dịkwa nro, yabụ CNC ma ọ bụ mbipụta 3D laser n'ozuzu ya adịghị. Methodszọ ndị kachasị esi eme ka ihe atụ silicone bụ ihe nkedo agụụ na ịkpụ akpụ dị mfe.
The prototypes anyị mere maka ndị ahịa anyị bụ ndị a ：
3D na-emegharị prototypes
Ihe omuma nke silicone site na ihe nhicha efu
Ihe nyocha laser Laser 3D
Ihe ngosi plastik site na njuputa agụụ
Silicone prototypes site mfe ebu akpụ
N'elu ọgwụgwọ nke prototype
Tinyere mbipụta 3D, nhazi CNC, ikpuchi elu, eserese na silk nbipu akwụkwọ nke ụdị ihe eji emepụta plastik.
Gụnyere akụkụ nchara, alloy alloy, zinc alloy, igwe anaghị agba nchara akụkụ prototype mmepụta na eserese, electroplating, ọxịdashọn, PVD na ndị ọzọ na elu ọgwụgwọ.
Mestech nwere otu ndị injinia ọkachamara na imepụta ngwaahịa, na-enye obere ụlọ ọrụ na ndị pere mpe na ndị ahịa otu ọrụ nkwụsị nke imepụta ngwaahịa, imepụta ihe ngosi ngwaahịa, mmepụta plastik na ngwongwo ígwè, akụkụ nke imepụta ihe na ị nweta ụgbọ.